भ्युजमा रेकर्ड ब्रेक तर ट्रेन्डिङको ट्रेन्डमा परेन ‘क्याप्टेन’, अनमोल भन्दा सलिन छन् अगाडि - Purbeli News
भ्युजमा रेकर्ड ब्रेक तर ट्रेन्डिङको ट्रेन्डमा परेन ‘क्याप्टेन’, अनमोल भन्दा सलिन छन् अगाडि
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २०, २०७५ समय: १७:४५:३१
ईटहरी/ नेपालमा डिजिटल युगले पछिल्लो समय निक्कै फड्को मारेको देख्न सकिन्छ । यहि प्रबिधिले कसैलाई ठूलो सहयोग संगै स्टार नै बनाएको छ भने कसैलाई नराम्रो संग पछारेको पनि उदाहरण प्रसस्तै छ । यता नेपाली फिल्म नगरीमा पनि डिजिटल युगको प्रभाव निक्कै बढेको छ । सायद यो नहुदो हो त निर्माताको लगानी, निर्देशक कलाकार सहित सम्पुर्ण टिमको मेहनत नै धरापमा पो पर्थ्यो कि भन्न सकिन्छ ।
र, यहि प्रबिधिले नेपाली फिल्मलाई प्रतिक्षित र बहु प्रतिक्षित बनाउन पनि ठुलो भुमिका खेलेको छ । युट्युबमा आउने फिल्मका गीत र ट्रेलरले भ्युज, लाईक र कमेन्टकै आधारमा प्रतिक्षित मात्र हैन बहुप्रतिक्षित नै बनाईदिन्छ । मात्र, आईडिया हुनु पर्यो । यस्तैमा परेको छ अनमोल अभिनित ‘क्याप्टेन’ को भर्खरै सार्बजनिक ट्रेलर । हुन त अनमोल आफै पनि ब्रान्ड नाम हो । यसमा दुईमत नै छैन । क्याप्टेनको ट्रेलर सार्बजनिक भएपछि युट्युब नेपालमा ट्रेलरले राखेको रेकर्ड त ब्रेक गर्यो तर, युट्युब नेपाल ट्रेन्डिङमा भने पाईला टेक्न सकेको छैन ।
छोटो समयमा यति धेरै भ्युज आउदा पनि किन ट्रेन्डिङमा पर्न सकेन ? प्रमुख प्रश्न यो उब्जिएको छ । यो प्रश्न किन आयो भनिन्छ भने उता बिगतका दिनमा सार्बजनिक अन्य फिल्मको ट्रेलरलाई हेर्न सकिन्छ । धेरै पर जानै पर्दैन । केही दिन अघि मात्रै सार्बजनिक ‘यात्रा’को टिजरलाई हेर्दा हुन्छ । जस्मा सलिनमान बनिया छन् । युट्युब नेपाल ट्रेन्डिङ भन्नाले नेपालबाट धेरै हेरिएको भिडियो भन्ने बुझिन्छ । यति हुदा नेपालमा कतै अनमोलको भन्दा सलिनमानको फ्यान पो बढी छन कि ? भन्न सकिन्छ ।